AUTOTRADE GOLD - ATG - Robot varotra volamena - XAU/USD
Robot fivarotana volamena
AutoTrade Gold 5.0 dia a robot fanaovana varotra Indonezia mandeha ho azy mifototra amin'ny tsena volamena. Nantsoina koa hoe ATG, Goldoracle, Tena Gold na EA Robot Gold avy amin'ny mpampiasa azy, mikendry ny hahazo tombony isan'andro eo anelanelan'ny 0,5 sy 1,5% amin'ny renivohitra. Tsy afaka very mihoatra ny 3% isan'andro ianao. Ity robot ity dia manao varotra amin'ny fomba scalping ary manokatra toerana iray isaky ny mandeha. Azo antoka tanteraka, raha mirakitra fatiantoka ny ATG 5, dia hiezaka ny hanonitra ny tombony azony mandritra ny andro miaraka amin'ny varotra faharoa. Fantaro koa AutoTrade Crypto, robot ara-barotra vaovao manao tombony 7/7 andro amin'ny Bitcoin.
Misoratra anarana amin'ny AutoTrade Gold Tutorial nohavaozina
📀 EA ATG 5 azo alaina amin'ny rehetra broker.
Vidin'ny fahazoan-dàlana 1 amin'ny Auto Trade Gold
Fampiasam-bola farany ambany
Fampiasam-bola ankapobeny ambany indrindra naroso
Tombony azo isam-bolana
Tombon'ny robot AutoTrade Gold
Mitantana sy fehezo ny volanao manokana ao amin'ny broker LegoMarket LCC mampiasa ny app MetaTrader 4 ou miaraka amin'ny broker amin'ny safidinao amin'ny fividianana sy fampidinana ny robot avy amin'ny tranokala Pansaka (dingana 2 amin'ny lesona etsy ambany). Ianao ihany no afaka miditra amin'ny fampiasam-bolanao: Tahirim-bola voalohany + vola azo + zanabola.
Fifanakalozana mandeha ho azy
Tsy misy rindrambaiko hapetraka. Tsy mila fahaizana ara-barotra.
Vahaolana varotra novolavolain'i Pansaka, mifantoka amin'ny tsenam-bolamena.
Fahombiazana ± 15%
15% salan'isa fidiram-bola pasif amin'ny fandefasana isam-bolana.
Mihoatra ny 2 taona amin'ny tena tsena.
Atombohy amin'ny 250 kapital kely farafahakeliny ny traikefa.
Valiny mangarahara amin'ny fampiharanao MetaTrader 4.
15% fidiram-bola / volana miaraka amin'ny AutoTrade Gold
miaraka amin'ny Auto Trade Gold 5.0
🚧 Tandremo, tsy misy vidéo azo tsapain-tanana intsony ao amin'ny Youtube raha mbola eo amin'ny fikojakojana ny tranokala Pantheratrade mbola eo an-toerana. Havaozina tsy tapaka ny fampianarana voasoratra etsy ambany.
Manana kaonty Crypto
Sehatra mamela anao hividy sy hivarotra ny cryptocurrencies fa koa mba hamahana ny robot sy ny broker Lego Market.
Misoratra anarana amin'ny PantheraTrade
Sehatra API mampifandray ny ATG amin'ny broker Lego Market.
Vidio ny fahazoan-dàlanao amin'ny Pansaka
Sehatra fifandraisana mamela ny fividianana ny fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainanao.
Saripika sary Autotrade Gold amin'ny Instagram
Kajy ny tombony ATG 5.0 tsy misy zana-bola
Ny latabatra etsy ambany dia raisina ho ohatra ary mety tsy haneho ny tena zava-misy marina. Izy io dia manondro ny fivoaran'ny renivohinao araka ny vola napetraka, miorina amin'ny a fitomboan'ny 15% isam-bolana. Tsy noraisina tamin'ity kajy ity ny zanabola isan'andro. Raha manaisotra ny vola miditra ianao isam-bolana, dia mila 6 volana eo ho eo ianao hamerenana ny fampiasam-bola voalohany amin'ny 4 volana raha tsy misintona na inona na inona ianao.
+ Mpampiasa vola 300.000 XNUMX ATG5 vokatra
Fametrahana: 500 €
+ fahazoan-dàlana 2 ($ 224)
Fametrahana: 1500 €
Fametrahana: 5000 €
+ fahazoan-dàlana 3 ($ 560)
Fametrahana: 10000 €
⚠️ Fampahatsiahivana sy torohevitra manan-danja ho an'ny mpampiasa vola rehetra
Tsarovy fa fampiasam-bola mampidi-doza izany, fa mampiasa vola tsy ilainao hivelomana ianao ary ny tanjonao voalohany dia ny hamerenana haingana ny renivolanao voalohany araka ny drafitrao.
Tetika ohatra : mampiasa vola 10.000 dolara aho AutoTrade Gold. Raha tsy misintona ary ao anatin'ny 5 volana dia tokony ho avo roa heny ny renivolako. Raha vantany vao mahatratra $22.000 aho dia manomboka misintona $2000 isaky ny mamokatra azy ireo ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ilay robot. Noho izany dia miala amin'ny $22.000 ka hatramin'ny $20.000 aho isaky ny mahatratra azy ireo. Noho izany dia mahita ny renivohitra voalohany aho ao anatin'ny latsaky ny 9 volana ary miteraka fidiram-bola mitentina $3000 isam-bolana (20.000 x 15%) noho ny Autotrade Gold.
Fahazoan-dàlana 5 misy arakaraka ny fahaizanao mivarotra
Ny fahazoan-dàlana dia azo amboarina, izany hoe ny fahasamihafan'ny fahazoan-dàlana amin'izao fotoana izao sy ny fahazoan-dàlana tadiavina ihany no aloanao. Ny robot dia tsy mivarotra amin'ny renivohitra $ 100. Raha miala ianao ary mihoatra ny $50 ao amin'ny kaontinao ara-barotra dia ho very ny fahazoan-dàlanao.
ohatra : Ny fahazoan-dàlana 2 dia voafetra amin'ny $5000 (renivola napetraka + vola miditra isan'andro). Midika izany fa miaraka amin'ity fahazoan-dàlana ity, rehefa nametraka ny renivolao ianao, ohatra $3000 ary nahazo $2000 tamin'ny karama, dia ho tonga amin'ny $5000 fara-fahakeliny. Avy eo dia hijanona ny varotra ny roboto. Noho izany dia tsy maintsy mamerina ampahany amin'ny vola miditra ianao na maka ny fahazoan-dàlana ambony kokoa. Aza hadino ny manavao alohan'ny hijanonan'ny roboto, raha tsy izany dia tsy maintsy mifandray amin'ny fanohanana ara-teknika ianao na mamerina amin'ny tanana ny fifandraisan'ny robot amin'ilay tranokala. ATG System. Misy bokotra omena ho an'izany tanjona izany.
ho an'ny totalin'ny renivola eo anelanelan'ny 100 sy 500 $.
Mividiana lisansa 1
ho an'ny totalin'ny renivola eo anelanelan'ny 100 sy 5.000 $.
Mividiana lisansa 2
ho an'ny totalin'ny renivola eo anelanelan'ny 100 sy 30.000 $.
Mividiana lisansa 3
ho an'ny totalin'ny renivola eo anelanelan'ny 100 sy 1.000.000 $.
Mividiana lisansa 4
ho an'ny renivohitra farafahakeliny 1.000.000 $.
Mividiana lisansa 5
Fanohanana ara-teknika ATG 5
Fanontaniana matetika momba ny Autotrade Gold 5.0
Fampahalalana fanampiny momba ny Bot Bot
Manana fanontaniana momba ny AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka na ATG System
Raha manana fanontaniana momba ny AutoTrade Gold 5.0, manoro hevitra anao aho hanatona akaiky ny mpanohana mivantana anao. Fanohanana ara-teknika avy amin'ny PantheraTrade dia ahitana mpiasa 70. Mba hifandraisana amin'izy ireo dia mila manokatra tapakila ianao ary manazava amin'ny teny anglisy ny fangatahanao amin'ny teny anglisy ary mametaka attachment mba hahazoana fahalalana bebe kokoa. Mifandraisa amin'izy ireo raha misy olana, raha tsy izany antsoy ny mpanohana anao. Ho an'ny olana momba ny fahazoan-dàlana, mifandraisa amin'ny fanohanana Pansaka, raha misy olana mifandray amin'ny robot-nao, aleo ny tranokala ATG System.
Sokafy ny tapakila amin'ny fanohanana ara-teknika RDV ao amin'ny Telegram hanaraka ny vaovao
Ny sasany manahy amin'ny Autotrade Gold 5.0?
Fanohanana ara-teknika avy amin'ny Panthera manontany anay, amin'ny maha mpanohana anao, hanampy anao amin'ireo olana mety sendra anao fa tsy maintsy atao ny fangatahanao manokana amin'ny fanokafana tapakila: https://panthera.support
Dingana 1 / PantheraTrade
Dingana harahina mba hisoratra anarana amin'ny robot Autotrade Gold 5
Manoro hevitra ny fampiasana a Adiresy Yahoo na Gmail rehefa misoratra anarana ianao. Ny sasany dia nanana olana nanamarina tamin'ny mailaka tamin'ny adiresy Hotmail, Live, Wanadoo, Laposte...
Misoratra anarana amin'ny AutoTrade Gold 5.0
Fenoy ireo saha 5 ilaina:
1 - Mamorona ny Anaranao
2 - Soraty ny anaranao sy ny anaranao
3 - Fidio ny firenena misy anao
4 - Ampidiro ny laharan'ny findainao
5 - Ampidiro ny mailakao (tsara kokoa ny Gmail)
Ekeo ny Fepetran'ny serivisy, dia alefaso
📨 Vao avy nandefa ny tenimiafinao i Autotrade. Azo ovaina any aoriana any. Raha tsy nahazo izany tao anatin'ny 5 minitra ianao dia afaka mangataka ny hanadino ny tenimiafina avy amin'ny pejy fidirana.
✅ Raha tsy manana kaonty cryptocurrency ianao dia manoro hevitra anao aho izao dia izao, hamoronana kaonty amin'ny Binance, Coinbase, Kraken... Halaviro ny fifanakalozana izay manakana ny fialanao mandritra ny adiny 2 mahery toa ny Crypto.com, ohatra. Azonao atao ny mividy crypto amin'ny Binance miaraka amin'ny carte de crédit anao. Na izany aza, ho tafahitsoka amin'ny fetran'ny fisintonana voafetran'ny bankinao ianao. Raha hanao famindram-bola amin'ny banky ka hametraka vola be dia be, azonao atao ny mampiasa ny serivisy SEPA amin'ny Binance.
Misoratra anarana amin'ny Binance Tutorial Binance
Raha efa voasoratra ny laharan-telefaoninao dia azonao averina ary soloina 06 ny 336, raha mipetraka any Frantsa ianao. Ampiasao ho fanindroany ny famantarana famantarana.
Dingana 2 / Pansaka
Misoratra anarana amin'ny Pansaka mba hahazoana ny lisansa ATG 5
Pansaka no orinasa mitantana ny fahazoan-dàlana rehetra amin'ny vokatra varotra Autotrade. Aza adino fa tsy maintsy manana ianaoUSDT na Litecoin LTC amin'ny fifanakalozanao hividianana ny fahazoan-dàlanao.
Misoratra anarana ao Pansaka
Isa Refera: 10110618
Fenoy ny endrika:
Anaram-bosotra + anarana fanampin
Kara-panondro na laharana pasipaoro vaovao
Password + fanamafisana
Fenoy ny endrika kaonty Crypto:
Safidio ny Crypto:
- Fidio USDT
Adiresy Crypto: Tondroy ny adiresinao petra-bola USDT
(Tambajotra Ethereum ERC 20) ihany
Dingana 3 / Pansaka
Ahoana ny fomba hividianana na fanavaozana ny licence-nao fiaraGold 5.0?
Ao amin'ny pejy fandraisana an'ny orinasa Pansaka, kitiho ny kiheba Fandaharana manokana> Vidio ny fonosana ho avy ary fidio ny fahazoan-dàlana araka ny habetsaky ny varotra tianao apetraka.
💡 Manoro hevitra anao aho hanomboka amin'ny fahazoan-dàlana 1 sy petra-bola $ 110 mba handinihana ny varotra robot sy ny fahaizany miteraka fidiram-bola. Azonao atao ny manavao ny fahazoan-dàlanao amin'ny alàlan'ny fandoavana ny fahasamihafan'ny tsirairay amin'izy ireo fotsiny. Koa manomboka amin'ny fividianana Litecoin (LTC) amin'ny Binance miaraka amin'ny habetsahan'ny 250 € amin'ny carte de crédit.
Mba handoavana ny fahazoan-dàlanao ary hametraka ny volanao amin'ny broker, manoro hevitra izahay hividianana sy handoa vola amin'ny Litecoin (LTC) noho ny fanamorana, ny hafainganana ary ny saram-pandraharahana ambany.
Mila adiny iray vao mazoto mampiasa CoinPayment ny fahazoan-dàlanao.
Dingana 4 / Pansaka
Manamarina sy mandoa ny licence-nao
Amin'ity ohatra ity dia nisafidy fahazoan-dàlana 2 an'ny robot ATG aho tao amin'ny broker Lego Market.
Button 1: Kitiho ity bokotra ity mba hisafidianana ny fandoavam-bola amin'ny cryptocurrency. Hisy popup hisokatra, tsindrio ny bokotra Crypto ary hanamafy.
Button 2: Manamarina sy miditra amin'ny faktiora
Dingana 5 / Pansaka
Famintinana ny vidiny sy ny vidiny amin'ny dolara.
Avy eo tsindrio ny bokotra Coinpayment.
Dingana 6 / Fandoavam-bola
Fandoavana ny fahazoan-dàlana Autotrade Gold amin'ny Litecoin (LTC), miaraka amin'ny CoinPayment.
Fenoy ny fampahalalana momba ny faktiorao eo ankavia, dia ny anaranao, ny anaranao ary ny adiresy mailaka (jereo fa tsy misy hadisoana amin'ny adiresy mailakao). Eo ankavanana, safidio ny cryptocurrency Litecoin (LTC) noho ny sarany ambany amin'ny fifanakalozana.
Ary farany, tsindrio ny bokotra manga eo ankavia, eo ambanin'ny mailaka, hanamarinana ilay endrika. Tsy ilaina mihitsy ny misoratra anarana amin'ny CoinPayment mba hamitana ny fifampiraharahana.
Hisy pejy CoinPayment vaovao hisokatra ary hampiseho aminao ny vola ary koaAdiresy LTC izay tsy maintsy hamindranao ny Litecoin (LTC) efa novidinao tamin'ny fifanakalozana nataonao (Binance, Coinbase, sns.).
amin'ny Binance, ity ny rohy momba ny mividy Litecoin amin'ny karatra banky.
Dingana 7 / Fandoavam-bola
Famaranana ny fandoavana ny fahazoan-dàlana Autotrade Gold.
Mandehana any amin'ny fifanakalozanao toy ny Binance, ataovy ny fisintonana marina amin'nyAdiresy LTC nangatahana. Tsarovy ny manampy ny 0,001 LTC amin'ny vola nangatahana raha tsy izany dia lavina ny fifampiraharahana ary haverina amin'ny alàlan'ny CoinPaiement ianao. Ny sarany dia hampiharin'ny Coinpayment ho setrin'izany.
Ampidiro ny adiresy LTC an'ny mpandray. Ity ny adiresy (tady) nampitaina tamin'ny Coinpayment.
Ny famindrana dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny tamba-jotra LTC.
Tondroy ny sandan'ny LTC amin'ny fanampiana 0,001 amin'ny vidiny farany
Avy eo manamarina ny endrika.
Hahazo mailaka fanamafisana amin'ny alàlan'ny Binance ary CoinPayment milaza aminao fa nahomby ny famindrana. Raha nanao fahadisoana ianao dia aza taitra! Hahazo mailaka hamerenana ny vola ianao ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny alàlan'ny CoinPaiment amin'ny saram-pandraharahana. Jereo ny spam-nao. Tokony holazainao ny anao Adiresy fametrahana LTC.
Dingana 8 / Pantheratrade
Fanokafana ny a kaonty MT4 varotra amin'ny Pantheratrade.
Mba hampiasana ireo robot ara-barotra isan-karazany atolotry ny orinasa PantheraTrade, mila manokatra a kaonty MT4 mahazatra. Izany dia hampifantoka ny vokatra rehetra atolotra anao.
Mba hanaovana izany, tsindrio ny rohy Kaonty mahazatra > kaonty MT4. Avy eo tsindrio ny bokotra Mamorona kaonty MT4
Dingana 9 / Pantheratrade
Ovao ny Tenimiafina vonjimaika voaray tamin'ny mailaka.
Vao avy nandray ny solonanarana sy tenimiafina vonjimaika tamin'ny mailaka ianao. Ny anaranao dia ny Login Login.
Hanova ny tenimiafinao vonjimaika izao izahay.
Mba hanaovana izany, tsindrio ny rohy eo amin'ny farany ambany havia amin'ny efijery: Avereno ny tenimiafina fidirana. Ampidiro ao amin'ny saha voalohany ny tenimiafinao vonjimaika voaray tamin'ny mailaka, avy eo ampidiro ny tenimiafina fidirana vaovao amin'ireo saha roa etsy ambany.
Dingana 10 / Pantheratrade
Mamorona ny kaontinao Autotrade Gold.
Voalohany, tsindrio ny rohy Kaonty CopyTrade > kaonty MT4. Tsindrio ny bokotra manga eo an-tampony havanana: Mamorona kaonty vaovao
Mifidiana AutoTradeGold ao amin'ny Select Category, dia tsindrio ny bokotra Mamorona kaonty MT4.
Tokony hiseho amin'ny pejy vaovao ny latabatra. Ataovy azo antoka ny kaonty MT4 Login sy ny tenimiafinao MT4 Investor. Halefa any aminao amin'ny mailaka koa izy ireo. Ireo kaody ireo dia ahafahanao manaraka ny varotra ary koa ny kaontinao isan'andro.
Dingana 11 / Pantheratrade
manome ny anao KYC hanamarina ny kaontinao.
Mba hanamarinana ny kaontinao dia tsy maintsy manome ny iray amin'ireo famantarana telo nangatahana ianao (karapanondrom-pirenena, pasipaoro na fahazoan-dàlana mitondra fiara). Tandremo, tsy tokony ho lany daty ny taratasinao momba ny mombamomba anao raha tsy izany dia lavina ho azy ny KYC anao.
Safidio ny karazana ID tianao dia makà sary amin'ny findainao.
Ampidiro ao amin'ny saha ny laharan'ny ID tianao: Ampidiro ny laharana ID.
Ampidiro ny sarinao (fanitarana manan-kery: jpg, jpeg na png). Aza mihoatra ny lanjan'ny 1 Mo. Mba hanatsarana ny sarinao alohan'ny handefasana, ampiasao ny tranokala tinypng.com.
Amin'ny pejy Update KYC, tokony ho hitanao amin'ny fomba "Miandry" ny satanao. Omeo fotoana ny ekipa Pantheratrade hanamarina ny antontan-taratasinao.
Dingana 12 / Pantheratrade
Aloavy ny tapakila hanamarina ny adiresinao petra-bola.
Ny Voucher Profile dia ny fisoratana anarana amin'ny adiresinao petra-bola hahazoana ny fandresen'ny robot. Ity adiresy ity dia mety ho BTC, ETH na USDT erc20 / trc20. Manoro hevitra nyUSDT trc20 (trx) noho ny vidiny ambany sy ny fahamarinany.
Tsindrio ny rohy Voucher Profile avy eo eo amin'ny bokotra Mividiana Voucher Vaovao
Safidio ny crypto: ETH, BTC, USDT TRC20 na USDT ERC20, avy eo manamarina
Eo amin'ny faran'ny pejy, tsindrio ny bokotra Manual Checkout, dia halefa any amin'ny Coinpayments ianao hanao ny fandoavam-bola
Dingana 13 / Pantheratrade
Voaloa ny Voucher Profile ary miseho eo amin'ny latabatra, tsanganana ny kaody Voucher anao tapakila. Ekena ny KYC anao. Ho vitantsika izao ny famenoana ny Profile.
Ampidiro aloha ny adiresinao USDT trc20 sy/na erc20 avy eo manamarina.
Hahazo kaody OTP amin'ny mailaka ianao. Ity kaody ity dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny saha voalohany.
Ao amin'ny saha faharoa, apetraho ny kaody Voucher izay ho hitanao eo amin'ny pejy Voucher Profile, Andry voucher. Dia manamarina.
Dingana 14 / PantheraTrade
Ahoana ny fametrahana ny renivola varotrao PantheraTrade ? (1/3)
Heverina fa efa eo am-pandoavana ny fahazoan-dalana.
Miverina amin'ilay tranonkala izahay PantheraTrade mba hametrahana ny renivohitra fivarotana amin'ny broker Lego Market LCC.
tsindrio eo amin'ny COPYTRADE COPYTRADE > Deposit MT4
Avy eo tsindrio ilay bokotra MT4 petra-bola vaovao
Raha ny mahazatra dia io no vola apetrakao voalohany PantheraTrade, fa raha maniry ny hampiakatra ny renivohinao ianao avy eo, dia tsy maintsy miverina amin'ity dingana ity ianao. Ataovy ao an-tsaina fa ny vola apetraka dia miankina amin'ny safidinao fahazoan-dàlana ihany koa.
Vola US $: farito ny vola tianao apetraka amin'ny dolara
Safidio ny kaonty: ny laharan'ny kaontinao ATG Gold
Zahao ilay boaty natokana ho an'ny fepetra fampiasana, avy eo alefaso ity takelaka ity
Arotsaho ny renivohinao CoinPayment. (2/3)
Fenoy ny fampahalalana momba ny faktioranao, dia ny anaranao, ny anaranao ary ny adiresy mailakao.
Misafidiana Litecoin (LTC).
Ary farany, tsindrio ny bokotra manga eo ankavia.
Hisy pejy vaovao hisokatra amin'ny CoinPayment manome anao ny vola sy ny adiresy tokony hametrahanao ny Litecoins LTC.
💡 Azafady, mariho, ity dia ho adiresy fametrahana vaovao. Tsy mitovy ny adiresy fametrahana anao sy ny licence-nao.
Arotsaho miaraka aminy ny renivola varotrao PantheraTrade. (3/3)
Fanodinkodinana sahala amin'ny fividianana fahazoan-dàlana. amin'ny Binance, ataovy ny fandoavana marina amin'ny fampidirana 0.001 amin'ny sandan'ny LTC nangatahana: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Ampidiro ny adiresy LTC an'ny mpandray, ilay voalaza ao amin'ny Coinpayment.
Lazao ny vola LTC, dia ampio 0,001 amin'ny vidiny farany.
☕️ Andraso am-polony minitra vitsivitsy. Hahazo mailaka fanamafisana amin'ny alàlan'ny Binance ary CoinPayment hampahafantatra anao fa natao tsara ny famindrana.
Raha mbola fanohanana ara-teknika an'ny Auto Trade Gold Tsy nanamarina ny fifanakalozana, tsy ho hitanao ny volanao amin'ny fampiharana MT4 anao.
Dingana 13 / Pansaka / ATG-System
Associate ATG System sy Pansaka
Mifandraisa amin'ny ATG System
Raha te hifandray amin'ny https://atgbot.co, ampiasao ny mailaka sy tenimiafina mitovy amin'ny ao Pantheratrade.
Miandrasa minitra maromaro vao raisin'ilay rafitra ny kaontinao. Ity fomba fiasa ity dia manan-kery amin'ny fividianana ny fahazoan-dàlana voalohany ary koa ny fanavaozana ny fahazoan-dàlana manaraka. Cala dia mamela anao hampifandray ilay lisansa vaovao amin'ny kaonty varotrao.
ianao dia ho mahazo mailaka avy amin'ny atgbot.co (jereo koa ny spam-nao).
Alao ny kaody voucher sy ny ID voucher hita ao amin'ny mailaka.
Mandehana any amin'ny tranokalan'ny ATG System amin'ny fampiasana ny code-nao Pantheratrade ary ampio ny fahazoan-dàlanao: https://atgbot.co/user/ea/activate
Adikao apetaho ireo singa ao anaty saha nangatahina.
Lazao tsara: Manana kaonty momba ny varotra aho
Safidio ny compte Gold
Avy eo manamarina ity takelaka ity.
⚠️ Ataovy azo antoka fa "Mifandray". Tsindrio ny bokotra "Refresh" raha ilaina mandra-pahatongan'izany. Andramo ora vitsivitsy aty aoriana raha tototry ny tambajotra, raha tsy izany dia sokafy a Taratasy fanohanana ara-teknika ATG System ho azy ireo hampavitrika ny robot ATG 5 anao.
Dingana 14 / MetaTrader 4
Ahoana ny fomba hanarahana ny karamanao amin'ny fampiharana MetaTrader 4 ?
MT4 dia fampiharana finday maimaim-poana ahafahanao manaraka ny fivoaran'ny vola miditra aminao. Na Android na IOS ianao dia ho hitanao mora foana ao amin'ny fivarotana. Jereo tsara ny logo, mila version 4 an'ny MetaTrader ianao.
Rehefa tafapetraka dia hamboarinay amin'ny kaontinao varotra izany. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy nahazo mailaka avy amin'ny PantheraTrade miaraka amin'ny angona manan-danja 4.
Master Password: Ny an'ny fahazoan-dàlana
Teny miafin'ny mpampiasa vola (vakio fotsiny): XXXXXX
Ao amin'ny fampiharana MT4, tsindrio ny Settings (kisary ambany havanana)> Kaonty vaovao> Midira amin'ny kaonty efa misy.
Ao amin'ny boaty fikarohana (eo an-tampony), soraty: LegoMarketLCC2-LIVE
Anaran'ny mpampiasa: Login (isa). Azonao atao ihany koa ny mahita azy ireo ao amin'ny pejy fandraisana ny Pantheratrade (kaonty MT4).
Password: Investor Password (vakiana fotsiny). Raha very ianao dia andramo ny tenimiafina nampiasainao Pantheratrade.
Dingana 15 / PantheraTrade
Ahoana ny fisintonana ny vola azonao sy / na ny renivohitra na oviana na oviana ?
Azonao atao ny miala amin'ny crypto voalaza ao amin'ny dingana 2. Raha toa ianao ka nanondro USDT amin'ny adiresy Crypto dia hahazo ianao USDT. Azafady mariho fa ny fisintonana dia $ 50 farafahakeliny ary farafahakeliny $ 2000 isan'andro ho an'ny kaonty latsaky ny $ 100.000. Mihoatra ny $ 100.000 napetraka (ary tsy azo), azonao atao ny manala ny 10% amin'ny renivohitra isan'andro. Manisa 15 hatramin'ny 35 $ ny saram-pandraharahana (na inona na inona ny vola tadiavina), arakaraka ny vola nofidiana.
Mialà amin'ny PantheraTrade
Miverina amin'ny tranokala raha te hisintona PantheraTradeclick on Fifanakalozana> Fialana.
Safidio ny vola niditra tao amin'ny saha adiresy crypto rehefa nisoratra anarana (USDT / LTC na hafa), avy eo manamarina.
Sary 1 - Fenoy ny fampahalalana nangatahana:
Loharano: Fidio na ny kaontinao MT4 na ny kaontinao fihenam-bidy. Azonao atao ihany koa ny mamerina amin'ny Wallet anatiny (mahazo komisiona ho an'ireo izay manohana).
Vola US $: vola tianao halaina amin'ny dolara
Ekeo ny fepetra dia Validate. Haverina mankany amin'ny pejy vaovao ianao ary hahazo mailaka miaraka amin'ny kaody OTP
Sary 2 - Jereo ary ekeo ny fisintonana:
Eo amin'ny faran'ity pejy ity, ampidiro indray ny tenimiafinao PantheraTrade na 2FA tsy adino izao ny manampy ny code (Email OTP). Raha mbola tsy nahazo ianao dia mety avy amin'ny mailaka (hotmail, yahoo...). Tsy misy olana ny fisoratana anarana amin'ny Gmail. Raha ilaina dia sokafy ny tapakila ary angataho izy ireo hanova ny adiresinao amin'izao fotoana izao ho adiresy gmail.
Dia manamarina ny fifampiraharahana.
Tsy maintsy miandry 24 ora eo ho eo ianao (ankoatra ny faran'ny herinandro) vao hapetraka ao amin'ny Exchange anao ny vola fisintahana. Izany dia miankina amin'ny fahasamihafan'ny fotoana eo amin'i Indonezia sy ny firenena misy anao.
Ahoana ny fomba hifandraisana amin'ny fanohanana ara-teknika Autotrade Gold ?
Mifandraisa amin'ny iray amin'ireo olona 70 ao ambadiky ny fanampiana ara-teknikan'ny Pantheratrade, miroso toy izao manaraka izao: adikao foana amin'ny teny anglisy na indonezianina ny hafatrao (google translate dia namanao), mivantana sy marim-pototra, manome porofon'ny fifampiraharahana (txid), tsara fanahy sy mahonon-tena. Mifandraisa amin'ny fanohanana raha misy olana, fa tsy mametraka fanontaniana. Ireo mpanohana, tambajotra sosialy ary forum dia manana izany tanjona izany. Aza mandefa hafatra maromaro, tsy misy ilana azy ary tsy mamela ny olana ho voavaha haingana kokoa, ny mifanohitra amin'izany.
Sokafy tapakila fanohanana PantheraTrade
Lohahevitra: teny 4 na 5 hilazalazana ny olanao
Sampana voafantina: Fandraisana an-tanana / vola / tambajotra
Safidio ny sokajy: miankina amin'ny saha etsy ambony ny fifantenana.
Hafatra: hazavao amin'ny anglisy na indonezianina ny olanao
Rohy sary: ​​Ahafahanao manampy sary manazava
Alefaso ny hafatrao.
Halefa aminao avy eo ny valiny ao anatin'ny 24 ora (tsy tafiditra ny faran'ny herinandro). Mahareta.
Tianao ve mpanohana ny robot ATG avy PantheraTrade ?
Raha te hanondro namana koa ianao ary hanome azy ireo tombony isam-bolana eo amin'ny 15% eo ho eo, dia mila manome azy ireo ny rohy referral ianao hita ao amin'ny pejy. Fiaraha-miasa> Dashboard
Toy izao ny URL handefasana ireo olona nanondro anao: https: //pantheratrade.live / register /? r = IB ...
Ny anjara asan'ny a tena raibe dia ny hitarika sy hanome torohevitra ny tsirairay amin'ireo zanany ho avy, manomboka amin'ny fisoratana anarana ka hatramin'ny fahazoana vola azo, manomboka amin'ny famindrana banky ka hatramin'ny cryptocurrency, manazava ny loza mety hitranga, maka fotoana amin'ny fanohanana ara-teknika ... ao amin'ny filankevitra sy ny hatsaram-panahy.
Kaomisiona mpanohana Autotrade Gold
Torohevitra fidirana ho an'ny mpampiasa taloha ny Pantheratrade
Ho an'ny mpampiasa vola izay nisoratra anarana tamin'ny Pantheratrade alohan'ny 18 martsa 2022 ary izay te hifandray amin'ny dikan-teny vaovao Pantheratrade.
Mandehana any amin'ny pejy: https://live.pantheratrade.tech
Ampidiro ny adiresy mailaka fidirana amin'ny kaontinao taloha PantheraTrade dia tsindrio ny bokotra validation.
Horaisinao amin'ny alàlan'ny mailaka ny anaranao sy ny tenimiafinao vonjimaika izay tsy maintsy ampidirina amin'ity pejy ity: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ Raha tsy nahazo ity mailaka ity ianao dia araho ireto dingana ireto:
Mandehana any amin'ny pejy: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Tsindrio ny Forgot Password
Soraty ny Anaranao
Ady anarana sy teny miafina ao amin'ny Pansaka no adino
Ho an'ireo olona nisoratra anarana tamin'ny AutoTrade Gold talohan'ny 1 septambra 2021 dia mety tsy nahazo ny antsipirian'ny fidirana Pansaka tamin'ny alàlan'ny mailaka ianao. Ity misy vahaolana handraisana azy ireo:
Fifandraisana amin'ny backoffice: https://pansaka.co.id/panel/login.php
Tsindrio ny rohy: Hadinonao ny tenimiafinao?
Ho tonga amin'ny pejy hafa ianao.
Tsindrio ny rohy: Adino ny ID an'ny mpampiasa?, avy eo ampidiro ny adiresy mailakao.
Hahazo mailaka voalohany ianao miaraka amin'ny ID fidirana. Ity dia filaharan'ny isa.
Miverina amin'ny pejin'ny fidirana Pansaka: https://pansaka.co.id/panel/login.php, avy eo tsindrio indray ilay rohy: Hadino ny teny miafinao? amin'ny alàlan'ny fanondroana ny mpampahalala anao (isa).
Afaka mampiditra ny anaranao sy ny tenimiafinao vaovao ianao hifandraisana amin'i Pansaka.
Mifantoka amin'ny tale jeneralin'ny Autotrade, Atoa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig
Dinar Wahyu Kenzo dia olo-malaza malaza any Indonezia. Mpampiasa vola fantatra, lasa tompon'andraikitra amin'ny sehatry ny IT sy ny teknolojia vaovao amin'ny anaran'ny fikambanana ARTI. (Fikambanan'ny Robot mpivarotra Indoneziana) manara-maso ny rafitra ara-barotra tsy ara-dalàna ao Indonezia sy ny fikambanana APLI mitantana ny varotra tambajotra nanomboka tamin'ny 1984. Lehilahy manana fo lehibe, noho ny tombom-barotra azo avy amin'ny orinasa, fonosana sakafo maherin'ny 10 no nozaraina tamin'ireo Indoneziana sahirana nandritra ny vanim-potoanan'ny Covid. Izy koa dia mpitantana ny orinasa RBG voafetra any Angletera, eo afovoan'ny Forex, ary manohana ekipa baolina kitra Indoneziana, mitovy amin'ny ligy 000 any Frantsa.
Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (afovoany) CEO Autotrade / Pansaka sy Bambang Soesatyo, filohan'ny parlemanta Indoneziana.